Remo.bg wuxuu soosaarayaa qalab loogu talagalay Photoshop si looga saaro asalka | Abuurista khadka tooska ah
Haddaan horay u haysannay kordhinta Photoshop qaybta khafiifinta asalka ama isticmaalka xulashada xitaa timo ay adag tahay in la calaamadeeyo, Remo.bg waa qalab cusub oo loo sameeyay barnaamijkan taas oo dhaqsa u saareysa asalka.
Qalabka wax ka dhigaya wax fudud, in kastoo waa in la yiraahdaa way fududaanaysaa wayna fududaanaysaa U isticmaal Adobe Sensei smart smart sababtan; ha lumin casharkaan oo ku tusaya adiga talaabo talaabo ah sida loo sameeyo gacanta. Waa run in qalabkani hubanti ka yahay inuu ka faa'iideysto horumarkan si uu u sameeyo sixir indhahayaga hortooda.
Xaqiiqda ka saar.bg waa degel noo ogolaanaya inaan si deg deg ah sawir u galino ka saar asalka sawir. Qaabkan waxaan ugu beddelan karnaa asalka mid kale oo waxaan u ekeysiin karnaa inaan nahay meelo kale. Waxaan horey u ogaanay sixirka kuxiran naqshadeynta garaafka, marka shabakadan wax walbo wey noo fududeyneysaa.
Hadana ilaa maanta ay ahayd degel sababahaas awgood, hadda waxay soo saartay qalab loogu talagalay Photoshop laftiisa. Kordhin loogu talagalay barnaamijkan waxaa lagu gartaa ogaanshaha sida loola macaamilo cilladahaas taasi waxay badanaa leedahay silhouette timo markaan isku dayeyno inaanu xulno asalka.
Sidoo kale waxaa kamid ahaa ku dheji awoodda aad u maamuli karto lakabyadaas shaqsi ahaan loogu talagalay codadka cagaaran iyo geesaha hooseeya ee hooseeya. Si loo isticmaalo kordhinta waxaan aan tagno xiriiriyahan Si aad u raacdo talaabooyinka iyo taas oo ah inaad iska diiwaangeliso shabakadda, soo dejiso oo dhig KALAHA API si aan awood ugu yeelano inaan nafteena ku xakameyno fiilada.
Un plugin si aad u fiican u shaqeeya oo aan kugula talineyno inaad ku isticmaasho Photoshop haddii aad suurogal tahay, in kasta oo aan marwalba haysanno nooca shabakadda ee aan uga baxno dhibaatada marka aanan haysan ikhtiyaarka ah helitaanka barnaamijkaas weyn ee naqshadeynta oo aan wada ognahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » Qalabkan 'Remo.bg' wuxuu awood u leeyahay inuu ka saaro asalka sawir Photoshop ah
Milton Glaser wuxuu naga tagayaa da'da 91